Evanjelin'i Pseodô-Matio - Wikipedia
Ny Evanjelin'i Pseodô-Matio dia soratra apokrifa kristiana voasoratra teo anelanelan'ny taona 600 sy 625. Io evanjely io dia fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe: Evanjelin'ny Fahazazana araka an'i Matio na Boky ny amin'ny Fahaterahan'i Maria Voatahy sy ny Fahazazan'ny Mpamonjy. Miresaka ny amin'ny fahaterahana sy ny fahazazan'i Maria avy eo ny fahaterahan'i Jesoa sy ny fandosirana tany Ejipta ilay boky. Iray amin'ny asa soratra atao hoe evanjelin'ny fahazazana io boky io.
Isan'ireo fitantarana maro momba ny fahazazan'i Jesoa izay nisy hatramin'ny taonjato faha-2 io boky io ary naka hevitra tao amin'ny Protevanjelin'i Jakoba. Avy amin'ny fanitsiana matetika azy ny Bokin'ny Fahaterahan'i Maria sy ny Fanangonana J.
Ahitana lovantsofina maro ny Evanjelin'i Pseodo-Matio ka isan'izany ilay boriky sy omby tao amin'ny siny ary koa ny fitantarana ny fahagagana niseho tamin'ny fandosirana tany Ejipta, indrindra ny amin'ilay antrendry: "Miondreha ry hazo ary fahano amin'ny voanao ny reniko". (toko faha-20)
↑ Hans-Josef Klauck, The Apocryphal Gospels: An Introduction, A&C Black, 2003, p. 78
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Evanjelin%27i_Pseodô-Matio&oldid=995531"
Voaova farany tamin'ny 31 Jolay 2020 amin'ny 10:10 ity pejy ity.